Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Vaccine Booster J&J COVID na -enweta Green Light ugbu a
Johnson & Johnson kwupụtara na Kọmitii Na-ahụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US (CDC) Kọmitii Ndụmọdụ na Omume Mgbochi Ọrịa (ACIP), akwadola ọgwụ mgbochi COVID-19 dị ka ihe nkwado maka ndị tozuru etozu niile nwetara ọgwụ mgbochi COVID-19 nyere ikike.
Paul Stoffels, MD, osote onye isi oche nke Kọmitii Executive na Chief Scientific Officer na "Nkwenye nke taa na-akwado iji ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson COVID-19 dị ka ihe nkwado maka ndị tozuru etozu na US n'agbanyeghị ụdị ọgwụ mgbochi mbụ ha nwetara." Johnson & Johnson. “Ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson nyere nchebe pasent 94 na US megide COVID-19 mgbe enyere ya dị ka ihe na-akwado ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson, na n'ihi usoro ọrụ ya pụrụ iche, na-enye nchebe na-adịgide adịgide, na-adịgide adịgide. Anyị na -enwe ntụkwasị obi na uru ọ ga -enye nde mmadụ gburugburu ụwa. ”
Akwadoro ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson COVID-19 ka ọ bụrụ ihe nkwado maka ndị okenye gbara afọ 18 ma ọ bụ karịa bụ ndị nwetara ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson otu ọnwa abụọ tupu mgbe ahụ. Akwadokwara ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson COVID-19 maka ndị tozuru etozu opekata mpe ọnwa isii na-eso ọgwụ nke abụọ nke ọgwụ mgbochi mRNA enyere ikike.
E zigara ntuziaka ACIP na Director CDC na Ngalaba Ahụike na Ọrụ Ndị mmadụ (HHS) maka ntụle na nkuchi.
Ogwu otu ụlọ ọgwụ COVID-19 natara ikike iji ihe mberede FDA maka ndị okenye gbara afọ 18 ma ọ bụ karịa na February 27, 2021. N'October 20, 2021, FDA nyere ikike maka ihe mberede jiri ogbugba ogbugba nke Johnson & Johnson COVID-19. maka ndị okenye gbara afọ 18 ma ọ bụ karịa ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ na-eso ịgba ọgwụ mgbochi mbụ na ọgwụ mgbochi otu ụlọ ọrụ.
Enyere ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 maka ojiji n'okpuru ikike iji ihe mberede (EUA) maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa iji gbochie ọrịa Coronavirus 2019 (COVID-19) nke ajọ ọrịa iku ume coronavirus 2 (SARS-CoV-2) kpatara:
• Usoro ịgba ọgwụ mgbochi nke mbụ maka ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 bụ otu mkpụrụ ọgwụ (0.5 mL) nke a na-enye ndị gbara afọ 18 gbagowe.
• Enwere ike inye otu Janssen COVID-19 ọgwụ nkwado ọgwụ (0.5 ml) opekata mpe ọnwa 2 ka agbachara ọgwụ mgbochi mbụ nye ndị gbara afọ 18 gbagoro.
• Enwere ike ịnye otu ọgwụ nkwado nke Janssen COVID-19 (0.5 ml) dị ka ọgwụ nkwalite dị iche iche na-esochi ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ enyere ikike ma ọ bụ akwadoro. Ọnụọgụ (ndị) tozuru etozu na etiti oge dosing maka dose nkwalite heterologous bụ otu ihe ahụ enyere ikike maka mmụba ọgwụ mgbochi ejiri maka ịgba ọgwụ mgbochi mbụ.
Ozi dị mkpa dị nchebe
GỊNỊ KA Ị GA-EKWUTARA Onye na-enye ọgwụ mgbochi ọrịa tupu ị nweta ọgwụ mgbochi JANSSEN COVID-19?
Gwa onye na -enye ọgwụ mgbochi gbasara ọnọdụ ahụike gị niile, gụnyere ma ọ bụrụ na:
• enwere ihe nfụkasị ọ bụla
• nwee ahụ ọkụ
• nwee nsogbu ọgbụgba ma ọ bụ nọ na ọbara mgbada
• na -adịkwaghị ike ma ọ bụ nọ na ọgwụ na -emetụta sistem gị
• dị ime ma ọ bụ kpebie ịtụrụ ime
• na -enye nwa ara
• enwetala ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ
• enwekwaghị ike ọgwụgwụ site na ịịnye ya
Kedu onye na-agaghị enweta ọgwụ mgbochi JANSSEN COVID-19?
Ị gaghị enweta ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 ma ọ bụrụ na:
• nwere mmeghachi ahụ nfụkasị siri ike mgbe ọgwụ mgbochi nke mbụ gasịrị
• nwere mmeghachi ahụ nfụkasị siri ike na ihe ọ bụla nke ọgwụ mgbochi a.
Kedu otu esi enye ọgwụ mgbochi COVID-19 nke JANSSEN?
A ga-enye gị ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 dịka ntụtụ n'ime akwara.
Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa: A na-enye ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 dị ka otu dose.
• Enwere ike gbaa otu ọgwụ na-akwalite ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 opekata mpe ọnwa abụọ ka ejiri ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 gbaa ọgwụ mgbochi mbụ.
• Enwere ike ịnye otu ọgwụ na-agba ume nke ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 nye ndị tozuru etozu bụ ndị ji ọgwụ mgbochi COVID-19 ọzọ enyere ikike ma ọ bụ nke akwadoro ịgba ọgwụ mgbochi mbụ. Biko jụọ onye na -ahụ maka ahụike gị gbasara ntozu maka na oge ị theụ ọgwụ nkwalite ahụ.
GỊNỊ bụ ihe egwu dị na VACCINE JANSSEN COVID-19?
Mmetụta dị iche iche nke agụnyere na Vaccine Janssen COVID-19 gụnyere:
• Mmeghachi omume saịtị ịgba ọgwụ: mgbu, ọbara ọbara nke akpụkpọ ahụ, na ọzịza.
• Mmetụta dị n'ozuzu: isi ọwụwa, inwe oke ike ọgwụgwụ, mgbu akwara, ọgbụgbọ, ahụ ọkụ.
• Akụkụ lymph fụrụ akpụ.
• Ọbara ọgbụgba.
• Mmetụta na -adịghị ahụkebe n'akpụkpọ ahụ (dịka tingling ma ọ bụ mmịfe) (paresthesia), mbelata mmetụta ma ọ bụ mmetụta, ọkachasị na akpụkpọ ahụ (hypoesthesia).
• Mkpọku na-adịgide adịgide na ntị (tinnitus).
• afọ ọsịsa, ọgbụgbọ.
Mmeghachi omume nfụkasị siri ike
Enwere ohere dị anya na ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 nwere ike ibute mmeghachi ahụ nfụkasị. Mmeghachi ahụ nfụkasị ahụ na-adịkarị ga-eme n'ime nkeji ole na ole ruo otu awa mgbe ị nwetachara ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19. Maka nke a, onye na -ahụ maka ịgba ọgwụ mgbochi nwere ike ịrịọ gị ka ịnọ ebe ị nwetara ọgwụ mgbochi gị maka nleba anya mgbe ịgba ọgwụ mgbochi gasịrị. Ihe ịrịba ama nke mmeghachi omume nfụkasị siri ike nwere ike ịgụnye:
• Nsogbu iku ume
• Ọzịza nke ihu gị na akpịrị
• Ọsọ ọsọ nke obi
• Mgbakasị ọjọọ na ahụ gị niile
• Dizziness na adịghị ike
Ọbara ọbara nwere obere platelet
Mkpọchi ọbara metụtara arịa ọbara na ụbụrụ, ngụgụ, afọ, na ụkwụ yana obere platelet (mkpụrụ ndụ ọbara na-enyere ahụ gị aka ịkwụsị ọbara ọgbụgba), emeela na ụfọdụ ndị mmadụ nwetara ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19. N'ime ndị mepụtara mkpụkọ ọbara a na ọkwa platelet dị ala, ihe mgbaàmà malitere n'ihe dị ka otu izu ruo izu abụọ ka ịgba ọgwụ mgbochi gasịrị. Ịkọ mkpesa mkpụkọ ọbara na ọkwa platelet dị ala bụ nke kachasị na ụmụ nwanyị dị afọ 18 ruo 49. Ohere nke ime nke a dị anya. Ị kwesịrị ịchọ nlekọta ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere nke ọ bụla n'ime mgbaàmà ndị a mgbe ị natasịrị ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19:
• mkpụmkpụ ume,
• mgbu obi,
• Ọzịza ụkwụ,
• Ihe mgbu afọ na -adịgide adịgide,
• Isi ọwụwa siri ike ma ọ bụ na -adịgide adịgide ma ọ bụ nhụcha anya,
• nhịahụ dị nfe ma ọ bụ obere ntụpọ ọbara n'okpuru anụ ahụ gafere saịtị ịgba ntụtụ ahụ.
Ndị a nwere ike ọ gaghị abụ nsonaazụ niile nke ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19. Mmetụta dị egwu na nke a na -atụghị anya ya nwere ike ime. A ka na-amụ ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 na nnwale ụlọ ọgwụ.
Ọrịa Guillain Barré
Ọrịa Guillain Barré (ọrịa akwara ozi ebe sistem ahụ na-emebi sel akwara, na-ebute adịghị ike anụ ahụ na mgbe ụfọdụ ahụ mkpọnwụ) emeela na ụfọdụ ndị mmadụ nwetara ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19. N'ọtụtụ n'ime ndị a, mgbaàmà bidoro n'ime ụbọchị iri anọ na anọ na-anata ọgwụ mgbochi Janssen COVID-42. Ohere nke ime nke a dị obere. Ị kwesịrị ịchọ nlekọta ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na ị mepee nke ọ bụla n'ime mgbaàmà ndị a mgbe ị natasịrị ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19:
• Mmetụta adịghị ike ma ọ bụ tingling, ọkachasị n'ụkwụ ma ọ bụ ogwe aka, nke ahụ na -akawanye njọ ma gbasaa n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ.
• Ịga ije siri ike.
• Ihe isi ike na mmegharị ihu, gụnyere ikwu okwu, ịta, ma ọ bụ ilo.
• Ọhụhụ ụzọ ugboro abụọ ma ọ bụ enweghị ike ịmegharị anya.
• Ihe isi ike na njikwa eriri afo ma ọ bụ ọrụ afọ.
GỊNỊ ka m ga -eme gbasara mmetụta ndị dị n'akụkụ?
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmeghachi omume nfụkasị siri ike, kpọọ 9-1-1, ma ọ bụ gaa ụlọ ọgwụ kacha nso.
Kpọọ onye na -ahụ maka ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ onye na -ahụ maka ahụike gị ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta ọ bụla na -enye gị nsogbu ma ọ bụ na ị gaghị apụ.
Kpesa mmetụta ọgwụ mgbochi nye FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Nọmba efu VAERS bụ 1-800-822-7967 ma ọ bụ kọọ akụkọ n'ịntanetị vaers.hhs.gov. Biko tinye “Vaccine Janssen COVID-19 EUA” n'ahịrị mbụ nke igbe #18 nke ụdị akụkọ ahụ. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịkọrọ Janssen Biotech Inc. mmetụta ndị dị na 1-800-565-4008.
Enwere m ike ịnweta ọgwụ mgbochi JANSSEN COVID-19 n'otu oge ahụ dị ka ọgwụ mgbochi ndị ọzọ?
Edebebeghị FDA data maka nchịkwa ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 n'otu oge yana ọgwụ mgbochi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-atụle ịnata ọgwụ mgbochi Janssen COVID-19 yana ọgwụ mgbochi ndị ọzọ, soro onye na-ahụ maka ahụike gị kwurịta nhọrọ gị.